Date My Pet » 8 Great First Date Mibvunzo Zvaunofanira Ask
8 Great First Date Mibvunzo Zvaunofanira Ask
Takaona zvose uri kutanga mazuva. Vangave vakaita zvakatungamirira ukama kana dzakaguma pashure misi shoma, isu tose kuziva muedzo uye kufunganya kuti anouya chete musangano uyu wokutanga inaugural. Saizvozvo, kutanga misi zvinogona semhosva rimwe rematanho anonetsa ezvinhu munharaunda. Asi ndichaita kuti imi mune zvishoma chakavanzika: kiyi inobudirira yokutanga musi akadzikama, hwomutambarakede kukurukurirana. Izvi zvinogona nyore nokuzadzikiswa kuburikidza yakanyatsosarudzwa vokutanga mibvunzo zuva.
Ndiani ave kukonzera muupenyu hwako?
Nokubvunza mubvunzo uyu, uchanzwisisa nani tsika yenyu zuva uye tsika. Zvicharatidzawo kukuratidza ani vachateerera kutungamirirwa uye mazano.
Apo nzvimbo yako waunofarira yose iri? Sei?
Kana zviri kumhenderekedzo, makomo, kana kumwe vari pakati, mubvunzo uyu uchapa nzwisiso dzenyu mazuva 'hunhu.
Unonyanya kufarira firimu nguva dzose? Sei?
Kwete chete ichi icharatidza dzenyu misi 'zvadzinofarira uye zvido asi kuri inoratidza zvakanaka kuona kana uri enderana.
Chii rako guru chinangwa muupenyu iye zvino?
Mubvunzo uyu haangavi chete kukuudzai sei chinzvimbo musi wako asi ndichapa nzwisiso chaiyo nguva youpenyu kuti vari.
Ndeipi nzira yako kufarira kushandisa vhiki renyu?
Mhinduro yomubvunzo uyu icharatidza yenyu zuva mararamiro, zvavanofarira, uye mabasa aunofarira. Ichi ndechimwe mubvunzo wakanaka kuona kana uri enderana.
Chii chaiva mhuri yako yakaita achikura?
Kuwana onei sei zuva renyu akamutswa ataure kwauri sei uchamutsa (kana pane dzimwe nguva, kwete mutsai) vana vavo remangwana. mhinduro Izvi anoratidza sei zuva renyu rakashevedzwa kumbotiitira muupenyu, kuratidza vakawanda hunhu hwavo.
Chii chaunoona ukwezve?
Kunze kwokungotarisira wekemisitiri uye kukwezvwa, teererai chii unhu dating wako rinotsanangura. Mhinduro yomubvunzo uyu tichaudza chii chaizvo zvavanoda mune imwe shamwari. Uye kakawanda, unhu ivo zvinyore ndivo ndivo kuti nhaka pachavo.
Chii zuva rimwe kuti mungadai kuda kuti atange kufunga?
Mubvunzo uyu ndiye kurondedzerwa zvikuru sezvo imi kwete chete kuwana kwatakaita kupinda hwako zuva upenyu asi unokwanisa atange kufunga nawo kwemaminitsi mashoma iwayo sezvo ivo tsanangura kwamuri.
Zvechokwadi mibvunzo iyi inongova danho rokutanga. Chero bedzi imi Nyatsonditeererai, hauziri pachedu kana shungu, uye zvechokwadi, imi muri chokwadi kuti inakidzwe zuva rokutanga.